SynWin Joogsiga Joogtada Guga | Xadhiga guga guga
Joodariga guga ee joogtada ah
Xadhiga guga guga
Furaashka Gu'ga ee Blonell
15cm oo duudduuban
20cm rogrosso joodariga
5 joodariga hudheelka
4 Furaashka Star Hotel
3 Furaashka Star Hotel
Joodariga caadiga ah ee xumbo
Xusuus-qorka xumbada xumbo
Ku saabsan SynWin
Xarunta khibradda hurdada
Guri qol leh
Tilmaanta Iibsiga Fudud
Warshada joodariga Synwin waxay inta badan soo saartaa joodariga guga, joodariga guga jeebka iyojoodariga guga bonnell Shiinaha. Maxaa noo doora.
15 SANO SOO SAARID JIRADA ①
15 sano oo waayo-aragnimo ah samaynta joodariyaasha iyo qalabka furaashyada.
30000 PCS WAX KA SOO BAXAY BISHII ③
30000 pcs wax soo saarka bishii, sahay deggan, gaarsiin degdeg ah
100% Khibrad Dhoofinta ⑤
Furaash Synwin in ka badan 14 sano waayo-aragnimo u dhoofinta adduunka oo dhan, ka qaybgal bandhigga sannad kasta sida Canton Fair, CIFF furniture carw,
② 70% ALAAB CAYRIIN AYAAN SAMEYNAY
70% walxo cayriin ah oo annagu sameeyay, gaar ahaan waayo-aragnimada 32 sano ee nidaamka guga
④ 80000 M2 Aagga wax-soo-saarka
Warshadayadu waxay leedahay in ka badan 80000 mitir oo laba jibbaaran, hubi sahayda joodariga ah bishii kasta.
⑥ ODM IYO OEM
Bixi qorshaha ODM iyo OEM iyo hal adeeg oo joogsi ah.
Kala duwanaanshaha Alaabooyinka Premium
Dhammaantood waxaa loo soo saaray si waafaqsan heerarka caalamiga ah ee ugu adag. Badeecadahayadu waxay raalli ka noqdeen suuqyada gudaha iyo dibaddaba.
Waxay hadda si ballaaran u dhoofinayaan 200 oo waddan.
Xirfadle ahaanChina soo saaraha joodariga, Synwin, waxay bixisaajoodariga caadada ah, joodariga guga jeebka, joodariga guga bonnell,joodariga guga joogtada ahiwm.
Synwin, alaab-qeybiyeyaal furaashyo xirfad leh - furaashyadayada ayaa si weyn loogu isticmaalaa dukaamada tafaariiqda, dukaamada waaweyn, jumladleyda, qaybiyaha iyo mashaariicda huteelada xiddigaha iwm.
100% Iibka tooska ah ee Warshada-Ma jiro wax dhexdhexaadin ah oo sameeya faraqa, waxay badbaadiyaan kharashaad badan, waxayna kaa caawinayaan inaad hesho qiimo tartan badan
15 sano oo dammaanad ah nidaamka guga, In ka badan raaxada. Hurdada wanaagsan ee habeenku waxay ka bilaabataa joodariga saxda ah.
Sawir naqshad bilaash ah oo loogu talagalay macaamiisha khadka tooska ah, Wuxuu kaa caawinayaa inaad si dhakhso leh suuqgeyn u sameyso.
RSB-PT23, Bonnell guga guriga isticmaalka barkinta sare
RSP-BT26, duuduubka guga jeebka ee sanduuqa
RSP3-ETM25.5 Xumbo xusuusta guga jeebka ayaa soo duuduubay
RSB-R22 Kordhi joodariga intarneedka ee bonnell
RSP-ETL28 Hudheelka cinjirka dabiiciga ah ee jeebka jeebka
RSB-2BT Laba dhinac ayaa adeegsada joodariga hudheelka cinjirka ah + xumbo xusuusta
RSP-2S Dhaqaale online ODM joodariga guga
RSB-B21 Ku soo rogo sanduuqa labada dhinac ee ugu sarreeya joodariga la isticmaalo
2000$ USD qiimo dhimis ah 40HQ, soo dir su'aal Hadda!
Synwin gugasaaraha furaash , laga soo bilaabo 2007, oo ku yaalFoshan, Shiinaha. Waxaa nala dhoofiyay furaashyo 15 sano ka badan. Sidajoodariga caadada ah,joodariga gugajoodariga guga bonnell, joodariga guga jeebka iyo furaash hotel iwm. Isla markaana. sida caadada u ahalaab-qeybiyeyaasha furaashyada, Ma aha oo kaliya inaan ku siin karno joodariga cabbirka caadiga ah, laakiin sidoo kale waxaan kugula talin karnaa qaabka caanka ah sida waafaqsan khibradda suuq-geynta. Furaashkeena ayaa si weyn loogu isticmaalaa jumlada, dukaamada tafaariiqda, dukaamada waaweyn, macaamiisha internetka iyo qaar ka mid ah mashaariicda huteelada iwm.
Waxaan nafteena u hurnay si aan u wanaajino ganacsiga furaashkaaga. Aan suuqa wada galno. Joodariga Synwin ayaa horay ugu sii socda suuqa tartanka. Waxaan u siin karnaa macaamiisheena adeegga joodariga OEM/ODM, dhammaan guga joodariyaashayadu waxay socon karaan 15 sano mana hoos u dhacaan.
Joodari cusub oo jeebka 2021 soo socda
Furaashyada sare ee barkinta cusub ayaa daabacday
Ku xir mashiinka duubista
3zone jeebka xudunta guga ee bakhaarka
Sida Shiinaha 15-sano soo saaraha joodariga, Synwin waxa ay siinaysay macaamiisha caalamiga ah tayada ugu wanaagsan ee qiimaha warshadda,
Alaab-qeybiyeyaasha joodariga Synwin ayaa kalsooni sare laga siiyay macaamiisheeda furaashyada gudaha iyo dibaddaba. Waxaan aqbalnaa joodariga gaarka ah, cabbir kasta, miisaaniyad kasta, qaab kasta ayaa diyaar ah. Qaybaha Synwin-siinta ee Serta gudaha, Sealy, Kingkoil, Slumberland iyo noocyada kale ee caanka ah ee caalamiga ah in ka badan 4 sano. tayada badeecada waxaa si weyn u aqoonsan macaamiisheena.
100ka tafaariiqle ee ugu sarreeya caalamka
Bakhaarada Alaabaha Sare iyo Dukaamada Furaashyada
Shabakadda Wax-ka-iibsiga ee Onlineka ah
Synwin waxa ay soo saari kartaa joodariga gaarka ah, joodariga guga jeebka, joodariga guga bonnell iyo furaash guga oo joogto ah,joodariga hoteelka iwm. Halkan ku siin oursaaraha furaash wararka shirkadda, joodariga cusub design, qaab cusub, iyoalaab-qeybiyeyaasha furaashyada xog cusub. Halkan, waxaad dhab ahaantii arki kartaa hordhaca warshadeena, dhaqanka shirkadda, kooxda iibka, iyo tallaalada alaabta dhabta ah.
Kaliya akhri hal daqiiqo si aad si dhakhso leh u fahanto Synwin!
Waa maxay joodariga guga?
Qaar ka mid ah talooyinka iibsiga joodariga
Furaashkee ayaa ku habboon inay seexdaan?
Sidee loo doortaa joodariga guga jeebka?
HADDA NALA HADAL,
MALAHA INAAN CAAWIN KARNO!
Gacaliye, waxaan kuugu jawaabi doonaa 12 saacadood gudahood. Dhammaan fariintaada waa la ilaaliyay!
Naga hel alibaba: swmattress.en.alibaba.com.
U sheeg: +86-757-85519362/ +86 -757-85519325
Kudar: NO.39Xingye Road, Ganglian Industrial Zone, Lishui, Nanhai Ditirct, Foshan, Guangdong, P.R.China
Kala xidhiidh Iibka SYNWIN.
Xuquuqda daabacaadda © 2022 Synwin furaash (Guangdong Synwin Non Woven Technology Co., Ltd.) | Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin 粤ICP备19068558号-3